Rikoooo.com - fiaramanidina alaina tsy mampiseho ny hoditra ivelany, izany hoe i Matin Marauder ihany no aseho
Lahatsoratra tsy mbola novakiana • Lahatsoratra 7 • Pejy 1 of 1
Joined: 19 Jan 2018, 16:06
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by robtho » 16 feb 2018, 21:56
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 17 feb 2018, 03:21
Mihazakazaka DX9 na DX10 preview ve ianao? Mihazakazaka ve ianao? FSX Fiompiana sa fitaterana? Raha misy hazakaza-tsavily mihazakazaka miaraka aminao sa tsia? Inona ny version windows misy anao?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by robtho » 17 feb 2018, 10:31
Izaho dia mihazakazaka DX11 amin'ny windows 7 matihanina amin'ny dikan-dikan-dàlana tsotra FSX. Efa nisotro ronono aho ary niverina indray ny fiaramanidina simika taorian'ny taona marobe aho ka somary maina ihany. Saingy hitako ity tranokala ity mahafinaritra ary ny ankamaroan'ny rindrambaiko dia toa tsara ny miasa. Indrisy fa ireo no tena tianao
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 17 feb 2018, 10:47
Hello again ...FSX Ao amin'ny menu-ny safidy dia afaka mihazakazaka amin'ny DX9 na DX10 Preview / When FSX noforonina, talohan'ny famoahana ny DX10, fa mandeha amin'ny DX9 amin'ny toerana misy anao izy. Mandehana any amin'ny menio safidinao ary alao antoka fa tsy voamarina ny boaty preview DX10. Ny fiaramanidina Rikooo dia mihazakazaka DX9 amin'ny toerana misy anao. Ny sasany mifanaraka DX10 raha izy ireo dia ho ao amin'ny famaritana. Misy famolavolana payware misy hanitsiana ny topi-maso DX10, fa raha tsy mividy an'io programa io ianao dia tsara kokoa ny mihazakazaka FSX amin'ny DX9. Ny safidy tsotran'ny DX10 dia tsy miasa tsara, ary miteraka sary. Windows 7 dia sehatra matanjaka ho an'ny FSX ary izany no ampiasaiko ho an'ny simia. Ankehitriny dia nilaza ianao fa mihazakazaka dikan-teny mivantana FSX. Raha azoko io zo io dia midika fa ianao dia manana ny iray amin'ireo famoahana voalohany navoaka, na ny version deluxe. Raha izany no tranga dia mila ampidirina SP1 sy SP2 ianao, na ny Acceleration dia tsy maintsy ampidirina. Raha tsy izany, ny ankamaroan'ny freeware sy payload vaovao dia hanana olana ara-nofo. manana aho FSX fanontana volamena izay miaraka amin'ny kapila manafaingana. Azo inoana fa ho hitanao fa raha tsy nasianao maso ilay boaty DX10 Preview rehefa nametraka ilay programa ianao, ny olana dia izany FSX dia tsy voatery hifanaraka amin'ny fonosam-panompoana ilaina. Ampahafantaro ahy ... Misaotra
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by robtho » 17 feb 2018, 18:45
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 17 feb 2018, 18:57
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by robtho » 17 feb 2018, 19:23
Lahatsoratra 7 • Pejy 1 of 1